ABOUT Y.E.C | YEC
Catalyst for Change – အပြောင်းအလဲအတွက် အထောက်အပံ့ကောင်း
Y.E.C Learning Center သည် City of Oxford College မှ Diploma in Business and Management နှင့် Diploma in Banking ကို ပို့ချပေးလျက်ရှိသော မန္တလေးမြို့မှ တစ်ခုတည်းသော Center ဖြစ်ပါသည်။
Oxford မြို့အခြေစိုက် City of Oxford College (UK) မှ Diploma in Business & Management (DBM), Diploma in Banking and Finance (DBF) နှင့် Diploma in Entrepreneurship (DIE)
UK မှ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု International Qualifications Network (IQN, UK) မှ Diploma in Marketing, Diploma in Human Resource Management နှင့် Diploma in Hospitality Management တို့ကို မန္တလေးမြို့တွင် တရားဝင်ပို့ချခွင့်ရထားသည့် တစ်ခုတည်းသော Training Center ဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် LCCI Accounting Level I&II, III နှင့် ACCA Diploma in International Financial Reporting (IFRS), ACCA Part I & Part II ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပိုု.ချပေးလျက်ရှိပါသည်။
Y.E.C Learning Center သည် LCCI (UK) မှပေးအပ်သည့် Diploma in Business Administration (DBA) တွင် မြန်မာတပြည်လုံးအောင်ချက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ရခြင်းကြောင့် ကြိုးစားအားထုတ်သော သင်တန်းသားများအားလုံးအတွက် ဂုဏ်ယူမိပါသည်။
ABOUT Y.E.C Founder
☑ Dr. Phyo Paing သည်အသုုံးချစိတ်ပညာနှင်. Marketing ကိုု လေ.လာခဲ.ပြီး NLP Top Coach မှ နိုုင်ငံပေါင်း ၁၆ နုုိင်ငံမှ သင်တန်းသား ၃၀ ကျော်တွင် NLP Superstar ဆုုရရှိခဲ.ပြီး American Board of NLP မှ အသိအမှတ်ပြု Certified Master NLP Practitioner, Certified Master Timeline therapist နှင်. Certified Master NLP Coach ဖြစ်ပါသည်။
☑ GMC (Guerrilla Marketing Certificate) ရရှိပြီးသော Certified Guerrilla Marketer တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ Marketing 101, One-Page Marketing Plan, Guerrilla Marketing Plan, Social Media Marketing နှင်. နိုုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု Diploma သင်တန်းများကိုုပိုု.ချပေးလျက်ရှိသည်။
☑ Dr. Phyo Paing သည် Y.E.C Learning Center ကိုု စတင်တည်ထောင်သူ၊ Lecturer & Trainer စွန့်ဦးတီထွင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် Marketing အကြံပေးအနေဖြင့်ပြုလုပ်ပေးနေပြီး၊ ကုမ္ပဏီ အချို့ကို digital marketing ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
☑ မားကတ်တင်းနှင့် စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကို သင်ကြားသည်မှာ5နှစ်ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပြီး UK diploma တက်ရောက်နေသည့် ကျောင်းသားများ၊ working professionals များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကို Marketing နှင့် Business Management ဘာသာရပ်များပို့ချပေးလျက်ရှိပါသည်။
☑ နိုုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီတွင်ဝန်ထမ်းလုပ်ဖူးသည့်အပြင် ကိုယ်တိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေပါသဖြင့် ဘေးလူအမြင်၊ ဝန်ထမ်းအမြင်နှင့် အလုပ်ရှင်အမြင် ရှုထောင့်သုံးခုစလုံးမှ တွေးပေးနိုင်သည့်အတွက် သင်တန်းတက်ရောက်သူများအတွက် များစွာအကျိုးရှိစေမှာဖြစ်ပါသည်။
☑ မန္တလေး ဆေးတက္ကသိုုလ်မှ M.B.,B.S ဘွဲ.ရရှိခဲ.ပြီး ABE (UK) မှ Graduate Diploma in Business Management အပြင် MBA ကိုု ရရှိထားပါသည်။ University of Mandalay မှ စေလွတ်သည်. Asia ထိပ်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်သည်. Indian Institute of Management ကိုု သွားရောက်လေ.လာခဲ.ပါသည်။
☑ Marketing, Entrepreneurship နှင့် Supply Chain Management Certificate များကို Massachusetts Institute of Technology, Wharton University of Pennsylvania နှင့် University of Maryland တို့မှရရှိခဲ့ပါသည်။
Business Management နှင်. Marketing ဘာသာရပ်များကိုု သင်တန်းသားပေါင်း 3000 ကျော်ကိုု သင်ကြားပိုု.ချပေးခဲ.ပြီးဖြစ်ပါသည်။